Ndingenza ntoni kwiProcreate? | Creatives Online
Ndingenza ntoni kwiProcreate?
Ukuba le nto uyikhangelayo a isixhobo sokuzoba onokuthi uhambe ngayo ngokulula kwi-iPad, Iprocreate yeyakho. ngalinyeukudala es uno de Los inkquboas de dumamajo mI-ás enamandlaes y avanzados en el Wed.kokuchitha. Eisiqa isoftwe puede khuphisanair nge Los mejiintsimbi inkquboas de pintura yedijithali, como Photoshop o Umzekelisoumgcini.
I-Procreate ilula kakhulu ukuyisebenzisa, kodwa kwangaxeshanye inamathuba amaninzi. Enye yamandla e-Procreate kukukwazi ukulungelelanisa neemfuno zomculi. Kule post uya kuyazi ukuba yintoni le nkqubo, ixabiso layo, ibandakanya ntoni kunye nento onokuyenza ngayo.
1 Yintoni ukuzala?
2 Lithini ixabiso leProcreate?
3 I-Procreate ibandakanya ntoni?
4 Ndingenza ntoni kwiProcreate?
4.1 Iibrashi kunye nokwakheka
4.2 Lawula umbala
4.3 Ubhalo kunye neCalligraphy
4.4 Yenza ii-gifs ezinopopayi
4.5 Yenza i-timelapse yendalo yakho
ngalinyeukudala es una aplicAngleivuliwe de umzobo wobuchwephesha wedijithali cukufundaa yi Ukhohlakele Interactive. Se trukhokho de un inkquboa de isoftwe de miseloenthanda de pintura yedijithali que mnandikwaye yena en iPad. Está isifoñkokuchitha for ukuba una aphai-ramintoa de ubugcisa boyilo lwamagcisa kunye nabayili, y Está isifoñkokuchitha for kudalaar trabajos utitshalaesyodwaes. Nangona kukho inguqulelo ye-iPhone, inguqulelo ye "Pro" yenzelwe i-iPad kuphela.
El inkquboa kwakunjalo Lanzkokuchitha en 2011 y se ha hecho ethandwayo gracias a su ixabiso elifikelelekayo kunye nojongano olubonakalayo. Tzombiniikwi se ha gankokuchitha la reputAngleivuliwe como una aplicAngleivuliwe de isifohayi yedijithali yonke intoamente Versáukuba y cóngokuchasenea de usar.
I-Procreate ilungisa ujongano lwayo kwiimfuno zomsebenzisi, kuba inokusetyenziswa kwisikali esisuka kwi-iPad ukuya kwiscreen esigcweleyo sekhompyuter yedesktop.
Lithini ixabiso leProcreate?
Inguqulelo yasimahla yale software inemisebenzi elinganiselweyo. Kucetyiswa ukuba uhlawulele iPro version yale nkqubo kuba i Intlawulo yexesha elinye ye- € 10,99 , ngoko unokonwabela amandla apheleleyo ale nkqubo.
I-Procreate ibandakanya ntoni?
I-Procreate ibandakanya uluhlu lweenketho ezisivumela ukuba sizobe, sizobe, sipeyinte, kwaye sirekhode ividiyo. Las aphai-ramintoas tKulungileen unos eisiphumoos yenenengqondwenie impresionngaphambili. I-Procreate ibonelela ngezixhobo ezininzi, izihluzi, imidibaniso, iibrashi, kunye neziphumo ezifumanekayo kubazobi abasebenzisa i-iPad njengelaptop abayithandayo. Ezi ziquka:
Ngaphezulu kweebrashi ezingama-200 okungagqibekanga kwasasazeka 18 izimbo eyahlukileyo
Izixhobo ze imiyalezo
Izixhobo ze izangqa, imigca kunye namanqaku
Njengoko kwiPhotoshop, isebenza nge inkqubo umaleko
Izixhobo ze ukuphindaphinda kunye nokujikeleza
Izixhobo cima, igridi kunye nokwandisa
Ukukhethwa kunye nokuguqulwa kwe imibala
Posibilinto de ukungenisa imifanekiso de yonke intoa resolicuivuliwe
Opciivuliwe de ukwabelana kwiintanethi zentlalo.
Le software ikuvumela ukuba wenze imizobo yedijithali kunye nemifanekiso. Kodwa ekubeni lusetyenziso oluguquguqukayo olunjalo, unokuyisebenzisa ukuzoba, ukupeyinta, ukwenza iikholaji, ukuphinda uchukumise iifoto, wenze uyilo, wenze iibrendi, njl. TKananjalo unomsebenzi we yenza oopopayi onokuyithumela ngaphandle kwi-gif okanye ifomathi ye-mp4 njengevidiyo emfutshane. Phakathi kwemisebenzi ephawulekayo yile ilandelayo:
Iibrashi kunye nokwakheka
Esi sixhobo ineebrashi ezingagqibekanga ezingaphezu kwama-200 kwithala layo leencwadi kwaye yahlelwa kwi 18 iindlela ezahlukeneyo. Kwaye kunjalo, ukuba awonelisekanga ngela thala leencwadi, unako yenza okwakho ukuthungwa kunye neebrashi ngokwakho. Unokwenza iibrashi zakho ukusuka ekuqaleni, kwaye udibanise iibrashi ezimbini ukwenza entsha. Kwelinye icala, ukuba uqhele ukusebenza ngePhotoshop, kukho ukhetho lokungenisa iibhrashi ze-Adobe kwi-Procreate.
Njengezinye iinkqubo ezifana Photoshop okanye Illustrator, sinayo eyedropper. Kwi-Procreate ungakhetha umbala wawo nawuphi na umfanekiso, kuphela ngokucinezela imizuzwana embalwa kumfanekiso. Kukho iindlela ezintlanu ezahlukeneyo zokukhetha kunye nokuguqula imibala kule nkqubo:
Ivili: imalunga nevili phantse zonke iinkqubo, apho ungakhetha umbala kwaye uwuguqule ngendlela othanda ngayo.
Okuqhelekileyo: usebenzisa izilungisi ezintathu onakho tshintsha amaxabiso umbala ngokwahlukeneyo.
Ukuvisisana: kumbala owukhethayo, i imibala ehambelanayo, i-analog, i-triadic okanye umbala we-tetradic.
Ikhowudi: uthanda khuphela kwaye uncamathisele ikhowudi HSB, RGB okanye Hexadecimal yombala.
IiPalettes: une ilayibrari yephalethi yombala emiselweyos, nangona unokuzenza ngokwakho okanye uzingenise ngaphandle.
Ubhalo kunye neCalligraphy
Ayisiyo kuphela inkqubo elungileyo yokudala imizobo yedijithali kunye nemizobo. Iibrashi zayo zenza iProcreate isixhobo esigqibeleleyo sokwenza iLettering okanye iCalligraphy. Uyakwazi ukulungisa iifonti njengoko ufuna, ekubeni izicatshulwa zenziwe ngendlela ye-vector. Njengemibala yemibala, unako kwakhona ngenisa iifonti ezintsha.
Yenza ii-gifs ezinopopayi
para eLlo Shumiemos que dumamaingcambu, pintar o elulangqondwenie ikhampasiOner un umzobo nge nuEstra aphai-ramintoa. Una vez uhlazaamos intlanganisokokuchitha nge nuimpembelelo dumamajo, singawugcina njengomfanekiso okanye kwifomati yegif.
Isicelo sikwavumela ukuba senze ii-gifs kwi-hard drive yethu, yi lo que ngaphantsiemos ngxowaar Ku bonisacho de nuEstros dibujos y ikhampasiOnerLos en un gif que puede ukuba Iluncedoizkokuchitha en difekhoyoes lugares. En la Versiivuliwe ukuthandangaphandlea de ngalinyeukudala hayi ngaphantsiemos kudalaar gifs, nganyeo si Shumiemos la Versiivuliwe ngalinye ngaphantsiemos kudalaar gifs de khawulezaa 30 imizuzwana.
Yenza i-timelapse yendalo yakho
I-Procreate iya kukhathalela ukugcina onke amanyathelo endalo yakho ngasemva. Ngombulelo kulo msebenzi uya kuba nakho ukujonga ukuphindaphinda kwawo wonke umsebenzi wakho wokudala. Ungabelana ngezi vidiyo. Ukuthathela ingqalelo ukuba igcina yonke into esiyenzayo, nayo ungahlehlisa ukuya kuthi ga kwinqanaba lokugqibela lamanyathelo ali-100.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Ndingenza ntoni kwiProcreate?
Iinkqubo zokwenza i-infographics